Ny fotoan-tsarotra tsy maharitra, fa ny olona henjana no manao. - Robert H. Schuller - Quotes Pedia
Ny fotoan-tsarotra tsy maharitra, fa ny olona henjana no manao. - Robert H. Schuller
Faharetana sy saina ny tanjaka dia afaka mandeha lavitra amin'ny fanampiana antsika handia fotoan-tsarotra. Mila manana saina tsara sy azo ampiharina isika. Mba hiatrehana ny fotoan-tsarotra ary hialana amin'izany dia tokony hiezaka hitady vahaolana hanampy antsika hivoaka amin'ny toe-javatra isika.
Raha tsy afaka manao izany ny olona iray dia tsara foana raha atao ny fiaraha-miasa hiatrehana ny fotoana maizina. Tokony hotadidin'ny olona foana fa "Ity no handalo". Mila miandry tamim-paharetana sy fanantenana foana isika.
Ny olona mianatra mandalo fotoan-tsarotra ary ny zava-dehibe kokoa dia mampitombo ny fahaizana hiatrika ireo toe-javatra sarotra.
Izy ireo no afaka miankina amin'ny hafa sy hahazo aingam-panahy avy amin'ny hafa. Izy ireo no manampy ny hafa hivezivezy amin'ny toe-javatra sarotra satria nianatra tamin'ny alàlan'ny traikefa izy ireo - ary izany no fomba tsara indrindra indrindra amin'ny fianarana.
Ny olona maharitra mandritra ny fotoan-tsarotra dia tena mahatakatra ny hasarobidin'ny fiainana sy ny zavatra maro. Tao anatin'ny toe-javatra izay nahalany nanao sorona betsaka izy ireo saingy nivoaka avy tao. Noho izany, tena tian'izy ireo ny zavatra kely eo amin'ny fiainana ary manana lesona maro ampitaina izy ireo.
Raha sendra mahita olona manahirana toa azy ianao, manandrama foana hahafantatra bebe kokoa momba ny zavatra niainany sy hianatra avy amin'izy ireo; mba hanananao fahatakarana izay tokony hataonao raha miatrika zava-tsarotra isan'andro ianao.
Mandeha amin'ny fotoana sarotra
Ny Fotoan-tsarotra Hard Quote And Say
Teny momba ny fandresena ny fotoan-tsarotra
Teny momba ny tanjaka amin'ny fotoan-tsarotra
Teny anglisy fohy
Indraindray dia sarotra ny fiainana
Rehefa mahazo aina ny fiainana
Ny zava-bitan'ny androany no natao. - Robert H. Schuller
Rehefa manana tanjona ianao ary mitohy hatrany, dia miatrika fotoana na hafa ianao dia hahita…
Avelao ny fanantenanao, fa tsy ny ratrao, mamolavola ny hoavinao. - Robert H. Schuller
Avelao ny fanantenanao, fa tsy ny ratrao, mamolavola ny hoavinao. - Robert H. Schuller Quotes mifandraika:
Jereo foana izay navelanao. Aza mijery izay very. - Robert H. Schuller
Ity fanamarihana ity dia maniry anao hanohitra ny hery mahery vaika indrindra amin'ny toetran'ny olombelona ary hamolavola vaovao ...